Baaq ku wajahan Wax doortaha iyo ladoortaha Mamul-goboledka Puntland
Eng. Hussein Hassan Soyan - Email: hsoyan@hotmail.com
Former Presidential Candidate for TFSR, 2004.
Waxaan hambalyo usoo jeedinayaa shacabka reer Puntland dadaalka dheer oo ay u soo mareen iney gaarsiiyaan Bulshadooda heer doorasho xor ah oo qofkasta oo mawaadin Puntland ahi uu u tartami karo Jagada sare ee maamul-goboleedka Puntland.
Hambalyo kadib waxaan ugu baaqayaa u tartamayasha Jagadaas iney dhawraan nadaamka ay Bulshadu dagsatey ilaaliyaana nabadgalyada, midnimada iyo horumarka Puntland sidey horey ugu ilaalin jireen Midnmada guud ee Somaliya.
Waxaa hubaal ah mar hadii latartamayo in aan lawada guuleysan karin oo qofi guuleysanayo, waxaana mudan in laxuso mar hadaad ogolaatid tartan in aad ogaatid in lagaa guuleysankaro islamarkaana sidii aad u jeclaan laheyd markaad guuleysatid in laguu taageero laguulana shaqeeyo ay tahay inaad ogolaatid oo taageertid natiijada ka soo baxda tartanka oo aad lashqeysid kan kaa guuleystey, islamarkaana aad ilaalisid midnimada iyo nabadgalyada Gobolka aad iska soo sharaxdey.
Waxaa kaloo mudan in aan xusno in tartanka dimuquraadiga ahi yahay aan tartanno hadii aad iga guuleysatidna waan kula shaqenayaa kuna taageerayaa ilaalinayaana midnimadana, hadaan kaa guuleystana itaageer ilana shaqee danta guudna aan ka hormarino tan gaar haaneed.
Anigoo ka mid ahaa intii ay u suurtagashey iney ka qaybqaataan Dawladii lagusoo dhisey Dalka Kenya mudo labo sano ku dhowna goob jog ka haa sidii wax u dhacayeen lana kulmey dad badan oo Odayaal reer Puntland ah siyaasiyiina ah dhagaystana fakarkooda ku wajahan Puntland waxaa ay kuligood is ku raacsanyihiin in maantey loo baahanyahay qof dadka wax u qaban kara; kor u qaadi kara adeegyada bulshada, ilaalina kara midnimada, hadana markey hoos u daadagaan waxay xusayaan in ay iayagu qabashada xilka Puntland xaq u leeyihiin beel ahaan, taasoo ka hor imaaneysa aragtidii ay hore isugu raaceen.
markaa hadaad jeceshahay in qabiilkaagu madaxtinimada waxaad u baahantahay in aad umadda wax u qabato oo aad ka hormariso xagga Cafimadka, Waxbarashada, Dhaqaalha iyo nabadgalyada; Waxaana aan filayaa in umaddu laqabiil noqonayso ninkii umadda wax u qabta kana shaqeeya horumarka bulshadiisa.
Waxaan tartamayaasha xusuusinayaa in umaddan dhibaatada faraha badani ku habsatay oo qof wax kaqaada maahee aan wali arag qof wax kusoo celiya, iinan hadda nabadgalyey haystaane aan intey haystaan lagala- tagin oo horumar bey u baahanyihiine aad ka hormarisaan hadba meeshey ugu baahi badanyihiin.
hadaadse horumarka u taqaan in bulshada wax laga qaado maahee aan wax lagu soo celin( Canshuur aan iskuul iyo isbitaal lagu dhisin) danbi malihid ee ciddii kudooratey ayaa danbile noqon doonta taariikhduna wey xusi dadka danta guud ka raaca tooda gaar ahaaneed.
Parlamanka Puntland oo beel lagusoo doortayoo horta ma is weydiisid beeshaadu maxay kaga baahantahay? Waxaan ognahay beeli iney ka koobantahay aabe, hooyo, wiil iyo gabar markaa Waalidkaa waxay u baahanyihiin Isbitaal, Biyo Nadiif ah iyo Jidad fiican, Wiilka/Gabadha aad dhashey ama kula dhashayna waxbarasho, shaqo iyo inta waalidkood rabo ayey u baahanyihiin markaa waxaa kula beel ah ninkii intaa u qabanaya bulshada reer Puntland ee kaa dooro adigoon beeshaada u eegin.
Waxaan aad u ga xumahay inaan Puntland Xisbiyo siyasadeed ka jirin oo badal u noqon kara Kuwa qabiilka ku dhisan, ayna suurtogaltahay in ay abuuraan loolan siyaasadeed oo foolxun waxaanse shacabka reer Puntland oo ku caanbaxay nabad jeclaanta ku boorineyaa ineysan marnaba fursad siin inta u aragta wadajirka Puntland khalad dhacay oo horey loogaley.
Ugudanbayntii waxaan isimada Puntland ka dalbeynaa anigoo ku hadlaya magaca inta jecel horumarka umadda Somaliyeed gaarhaan Reer Puntland in ay xoogooda isugu geeyaan in beel kastaaba soo xusho qof wakiil ka noqonkara shacabka reer Puntland lana xisaabtami kara Dawladda kalana noqon kara kalsoonida hadii ay ka soo bixi weydo mas�uuliyadda ay u qaadeen umaddooda.